Tongasoa eto LOFI Robot Ivontoerana fianarana - LOFI Robot foibe fianarana
LOFI Robot foibe fianarana
Menu sy Widget
Fiomanana - Atombohy eto!
Basics - alohan'ny hamoronana ny robina voalohany anao
Vavahady mandeha ho azy
LOFI Control fampiharana
Fahazavana manaraka ny Robot
Robot Milalao Football
Tongasoa eto LOFI Robot Learning Center
Tena mahafinaritra anao ny mahita anao eto!
Ity pejy ity dia misy torolàlana feno amin'ny torolàlana momba ny fivoriambe ary ny ohatra fanodinana ho an'ny rehetra LOFI Robot fitaovana. Alohan'ny hanombohanao miasa miaraka amin'ny anao LOFI Robot, manoro hevitra mafy izahay manomboka amin'ny Fizarana fanomanana. Manaraka, miroso mankany amin'ny fizarana mifanaraka amin'ilay kitaponao. Ny tompona kitapo feno dia afaka miara-miasa amin'ny ampahany rehetra.
Ho an'ny fahafaham-ponao dia afaka adika amin'ny fiteny iray amin'ny efatra zato ny atin'ny tranokala. Azonao atao ny misafidy ny fiteny izay mahazo aina indrindra amin'ny zoro ankavia amin'ny tranokala.